पछिल्लो सरकारका सहयोगीलाई घर-घर पुगेर किन खोज्दैछ तालिबान ? — Sanchar Kendra
१हजारौं बन्दीलाई मुक्त गर्ने सरकारको घोषणा, देशभर खुसियाली
२घरमा झुट बोलेर हिँडेकी मोडल नग्न अबास्थामा फेला परिन्, ट्याटुले खोलिदियो बेग्लै पोल
३प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण तय
४देउवा सरकारले गर्यो यस्ता नयाँ निर्णय, क-कसलाई आयो खुसीको खबर ?
५साफ उपविजेता खेलाडीलाई ५ लाख दिने सरकारको निर्णय
६१० मिनेटको अन्तरमा नेपालमा दुई पटक भूकम्पको धक्का
७भारी वर्षासँगै एक्कासी आएको बाढीका कारण २६ जनाको मृत्यु, थप बिबरणसहित
८मन्त्री बनेको १० दिनमै खोसियो रामकुमारी झाक्रीको जिम्मेवारी
९वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नर्भिक अस्पतालबाट आयो यस्तो खबर
१०वैद्यलाई भेट्न नर्भिक पुगे प्रचण्ड, अरु को-को गए ?
११काठमाडाै‌ हल्लिनेगरी नेपालमा फेरी भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
१२भारतका पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पक्राउ, यस्तो छ कारण
पछिल्लो सरकारका सहयोगीलाई घर-घर पुगेर किन खोज्दैछ तालिबान ?
तालिबानले नेटो सेना र अफगान सरकारसँग काम गरेकाहरूको खोजी तीव्र बनाएको संयुक्त राष्ट्रको एक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । रिपोर्टमा तालिबान विद्रोहीहरू घर-घर पुगेर उनीहरूको खोजी गर्दै परिवारलाई ध’म्की दिइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
उता, दोस्रोतर्फ तालिबान नेतृत्व भने अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएपछि कुनै प्रकारको बदला नलिने भनेर अफगानिस्तानका जनतालाई भरोसा दिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सन् १९९० ताका तालिबानको क्रूरता भोगेकाहरू उनीहरू बदल्नेमा कम आशावादी रहेका छन् ।
तालिबानको पछिल्लो ‘सर्च अपरेशन’ बारे आरएचआईपीटीओ नर्वेजियन सेन्टर फर ग्लोबल एनालिसिसले तयार गरेको हो । यो समूहले संयुक्त राष्ट्रलाई खुफिया जानकारी प्रदान गर्दछ ।
संस्थाका प्रमुख क्रिश्चियन नेलेमनले बीबीसीसँग भने, ‘तालिबान ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई निशाना बनाइरहेका छन् । उनीहरूमाथि खतरा बढिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । उनीहरूले आत्मसमर्पण नगरे तालिबानले उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर सजाय दिने नत्र उनीहरूको परिवारसँग सोधपुछ गरेर उनीहरूलाई पनि सजाय दिइने पत्र दिइएको छ ।’
उनका अनुसार तालिबानको कालोसूचीमा धेरै व्यक्तिहरूको नाम रहेको र उनीहरूलाई मृ’त्युद’ण्डको सजायसमेत दिन सकिनेछ । तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि विद्रोही समूहको डरले धेरैले देश छोड्न थालेका छन् । अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन लागू हुने भएपछि त्यहाँको अवस्था र अफगानी जनताका लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् ।
अफगानिस्तानका जनताहरु बेसहारा भएपछि अफगानी मुलकी हलिउड अभिनेत्री अजिता गनीजादाले लगातार निर्दोष जनताहरुका लागि आवाज उठाइरहेकी छन् । र, उनले तालिबानका विभिन्न क्रियाकलापहरु पनि बाहिर ल्याउन थालेकी छन् ।
तर, तालिबानका लडाकुहरुलाई अभिनेत्रीले वकालत गरेको मन पराएनन् । उनीहरुले अभिनेत्री अजितालाई धम्की दिन थालेका छन् ।अभिनेत्री अजिताले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पनि प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले अफगानीस्तानका जनताका लागि बाइडेनसँग न्याय समेत मागेकी छन् ।
उनले तालिबानका झुठको पर्दाफास गर्दै आएकी छन् । उनले आफ्ना पूराना फोटो र भिडियो शेयर गर्दै लेखेकी छन्, ‘हरेक मिनेटमा चिज बदलिन्छ । मलाई तालिबानका म्यासेज आइरहेका छन् । ‘डियर गर्ल चिन्ता नगर्नु, प्रोपोगान्डा फैलाउन बन्द गर ।’
यूएईको शरणमा पुगेका घानीले भने- रक्तपात हुन नदिन देश छोडेँ
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले मुलुकमा रक्तपात हुन नदिन देश छोडेँको बताएका छन् । उनी गत आइतबार देश छोडेर ताजिकिस्तानतर्फ लाग्नुभएको थियो ।
उनी अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्सको शरणमा पुगेको बताइएको छ । उनलाई बुधबार साँझ युनाइटेड अरब इमिरेट्समा स्वागत गरिएको छ । उनको साथमा उनको परिवारका सदस्यहरु पनि रहेका छन् ।
हिं’स्र’करूपमा तालिबानीले विभिन्न सहर हुँदै राजधानी काबुल नै कब्जा गर्न थालेपछि उनले गत आइतबार देश छाडेका थिए । देश छोडेपछि पहिलो पटक आफ्नो भनाइ राख्दै उनले आफूले देशमा रक्तपात हुने देखेर नै त्यसबाट बचाउनका लागि देश छोडेर हिँडेको बताएका छन् ।
उनले बुधबार आफ्नो राष्ट्रिय भाषा पास्तोमा सम्बोधन गर्दै सो धारणा राखेका थिए । त्यसक्रममा उनले आफ्ना पूर्वमन्त्रीले देश छोडेर भागेको भनी गरेको आलोचनाको पनि बचाउ गरे ।
आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का कतिपय मन्त्रीले देश नै अफ्ठ्यारो स्थितिमा परेको अवस्थामा आफूहरु र देशलाई नै छोडेर घानी भागेको भनेर आलोचना गरेका थिए । गएको आइतबार यता काबुललाई तालिबानीले कब्जामा लिएका छन् । उनीहरुले तालिबानी सरकार गठनको तयारी गरिरहेका छन् ।
काबुलमा जताततै तालिबानका ह’ति’यारधारी लडाकूले गस्ती गरिरहेका छन् । सडकमा महिलाको संख्या कम देखिए पनि दैनिक जनजीवनका अन्य गतिविधि सामान्य बन्दै गएको जस्तो देखिएको छ ।
काबुल अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर अस्तव्यस्त अवस्था कायम नै रहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तालिबानका लडाकू तथा अन्य सदस्यले विमानस्थल परिसर पस्न खोज्ने अफगानीलाई रोकिरहेका छन् । तालिबानले नै अहिले काबुलको सुरक्षा गरिरहेको बताइएको छ ।
हजारौं बन्दीलाई मुक्त गर्ने सरकारको घोषणा, देशभर खुसियाली
१० मिनेटको अन्तरमा नेपालमा दुई पटक भूकम्पको धक्का
भारी वर्षासँगै एक्कासी आएको बाढीका कारण २६ जनाको मृत्यु, थप बिबरणसहित
वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नर्भिक अस्पतालबाट आयो यस्तो खबर
काठमाडाै‌ हल्लिनेगरी नेपालमा फेरी भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
भारतका पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पक्राउ, यस्तो छ कारण
नुवाकोटबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस दुर्घटना, यस्तो छ क्षतिको विवरण